विवाहको संस्था किन बनाइएको हो ? यसले मानिसहरूको जीवनमा अनि समाजमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दछ ? सद्‌गुरु, विवाह र सम्बन्ध-बिच्छेदको बारेमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ ।
प्रश्न: मेरो प्रश्न विवाह र सम्बन्ध-बिच्छेदको बारेमा रहेको छ । मेरो वैवाहिक जीवनको २५ वर्ष पूरा भएको छ । यस दौरान थुप्रै क्षणहरू यस्ता थिए, जब मलाई सम्बन्ध-बिच्छेद गर्न मन लागेको थियो, तथापि जब म साँच्चिकै प्रेममा डुबेको हुन्थें, त्यसबेला निकै रमाइलो अनुभव हुन्थ्यो । तर, अचेल म यो देखिरहेको छु कि थुप्रै युवाहरू विवाह नै गर्न चाहँदैनन्, अनि जो विवाहित छन्, उनीहरू समेत सम्बन्ध-बिच्छेद (पारपाचुके) गरिरहेका छन् । सद्‌गुरु, तपाईं यस विषयमा केही प्रकाश पार्न चाहनुहुन्छ ?
सद्‌गुरु: तपाईं जे गर्न चाहनुहुन्थ्यो, उनीहरू त्यसमा सफल भएका हुन् ! तपाईंले विवाह कस्तो किसिमको संस्था हो भनेर बुझ्न जरूरी छ । विवाहको एउटा पक्ष भनेको हरेक व्यक्तिमा हुने मूलभूत आवश्यकताहरूमा एक प्रकारको पवित्रता ल्याउनु हो । हामीमा थुप्रै आवश्यकताहरू हुन्छन्— शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, भावनात्मक र सामाजिक आवश्यकताहरू । यी सम्पूर्ण आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि हामीले विवाह भन्ने संस्था स्थापना गरेका हौँ, जहाँ यी सबै चीजहरू उचित ढङ्गले पूरा गर्न सकिन्छ । विवाह, हाम्रो जीवनमा एक प्रकारले व्यवस्था, सौन्दर्य र स्थायित्व ल्याउनको निम्ति बनाइएको हो, किनकि पुरुष र स्त्री एकसाथ हुँदा स्वाभाविक रूपमा एउटा नयाँ जीवनको आगमन हुने गर्थ्यो ।
तपाईंले विवाह र सम्बन्ध-बिच्छेदको बारेमा एकै श्वासमा कुरा गर्नु जरूरी छैन— मानौँ कि ती दुवै सँगसँगै आउँछन् ।
मानव जीवनको प्रकृति, मानिसको बच्चाको प्रकृति यस्तो हुन्छ कि बाँकी जीवहरूको तुलनामा मनुष्यले जुन सम्भावनाहरू बोकेको हुन्छ, त्यसले गर्दा उसको जीवन एकदमै असाहय हुन्छ अनि उसलाई सबैभन्दा बढी हेरचाह र सहारा आवश्यक हुन्छ । तपाईंले कुकुरको छाउरालाई सडकमा यत्तिकै छोड्नुभयो भने, उसले राम्रोसँग खान पाउँदासम्म, ऊ बिस्तारै-बिस्तारै हुर्किँदै जान्छ अनि राम्रो कुकुर बन्दछ । तर, मानिसको सन्दर्भमा यस्तो हुँदैन— मान्छेको बच्चालाई शारीरिक हेरचाह मात्र नभई अन्य थुपै सहायताहरू जरूरी हुन्छ; सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्थिर परिवेश हुनु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । जब उनीहरू अठार वर्षका हुन्छन्, तब उनीहरू विवाह गर्नुपर्छ कि गर्नुपर्दैन भन्ने बिषयलाई लिएर विवाद गर्छन् । किनकी, भौतिक शरीरले स्वतन्त्र हुन खोजिरहेको हुन्छ । त्यसबेला, हरेक कसैमा यो प्रश्न उब्जिन्छ— के विवाह वास्तवमै आवश्यक छ ? के हामी आफूले चाहे जसरी जीवन बिताउन सक्दैनौँ ? तर, जब तपाईं तीन वर्षको हुनुहुन्थ्यो, तपाईं स्थिर वैवाहिक जीवनलाई निकै महत्त्व दिनुहुन्थ्यो, हैन र ? आफ्नो होइन, बरु आफ्ना आमाबुबाको !
जब तपाईं ३-४ वर्षको हुनुहुन्थ्यो, तब तपाईं १०० % विवाहको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । जब तपाईं ४५- ५० वर्ष पुग्नुहुन्छ, एकपटक पुनः तपाईं १००% विवाहको पक्षमा उभिनुहुन्छ । १८ देखि ३५ को उमेरमा मात्रै तपाईं यो पूरै संस्थामाथि प्रश्न उठाउनु हुन्छ ।
जुनबेला तपाईंमाथि भौतिक शरीर हाबी हुन्छ, यदि तपाईंले शरीरको कुरा सुन्नुभयो भने, तपाईं हरेक संस्थामाथि प्रश्न उठाउनु हुनेछ । यो तपाईंको हर्मोनले सल्काएको स्वतन्त्रता हो । तपाईंको बुद्धिमता हर्मोनको अधीनमा भएकोले, तपाईं हरेक चीजको आधारमाथि प्रश्न गर्नुहुन्छ । म यो भनिरहेको छैन कि विवाह नै एकमात्र उचित संस्था हो, तर के तपाईंसँग योभन्दा राम्रो विकल्प छ ? हामीसँग योभन्दा उचित विकल्प छैन, किनकी एउटा बच्चाको निम्ति स्थिर परिवेश हुनु अत्यन्तै जरूरी हुन्छ ।
विवाह रोजाइ हो, बाध्यता होइन
यदि तपाईंको मनका तरङ्ग र लहडहरू परिवर्तन भइरहन्छन्, यदि तपाईंका भावनाहरू बदलिरहन्छन् भने, त्यस्तो परिस्थितिमा नपर्नु नै उचित हुन्छ । हरेक व्यक्तिले विवाह गर्नु अनि बच्चा जन्माउनु पर्ने कुरा न त अनिवार्य छ, न नै आवश्यक । तर, यदि तपाईं त्यो रोज्नुहुन्छ अनि विशेषगरी तपाईंका बच्चाहरू छन् भने, तपाईंले यो कुरा बुझ्नैपर्छ कि यो कम्तीमा पनि बीस वर्षको परियोजना हो । त्यो पनि यदि उनीहरूले राम्रो गरे भने, नत्रभने यो जीवनभरिको काम हो । यदि तपाईं त्यसमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने, कम्तीमा पनि बीस वर्षको लागि स्थिर माहोल सृजना गर्नको निम्ति तपाईं प्रतिबद्द हुनैपर्छ । अन्यथा, तपाईंले त्यस्तो परियोजनामा हात हाल्नु हुँदैन । कुनै परियोजना सुरु गर्ने, बीचमै छोड्ने अनि त्यसबाट भाग्ने काम कहिल्यै नगर्नुहोस् ।
यदि तपाईंलाई त्यो मनपर्दैन भने परियोजना नै सुरु नगर्नुहोस्— छोटो समयका चीजहरू रोज्नुहोस् । यसका आफ्नै फाइदाहरू छन्, आफ्नै बेफाइदाहरू छन् । यो तपाईंको रोजाइ हो, तर जे रोज्दै हुनुहुन्छ कम्तीमा त्यो त होसपूर्वक रोज्नुहोस् । अरू सबैले विवाह गरिरहेका छन् भन्दैमा तपाईंले विवाह गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तपाईंले एकै श्वासमा विवाह र सम्बन्ध-बिच्छेदको बारेमा कुरा गर्न जरूरी छैन— कत्ति न दुवै सँगसँगै आउने जस्तो ! केही समय अगाडिसम्म यस संस्कृतिमा कसैले पनि सम्बन्ध-बिच्छेदको बारेमा सोच्थेनन् ।
यदि कुनै कारणवश केही भयो, जहाँ दुई व्यक्ति बीचको सम्बन्धमा फाटो आयो अनि त्यसलाई सुधार्ने अरू कुनै तरिकाहरू नभएकाले उनीहरू छुट्टिनै पर्ने हो भने, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । कुनैबेला त्यस्तो हुन्छ । तर, तपाईंले विवाहको समयमै सम्बन्ध-बिच्छेदको योजना बनाउनु पर्दैन ।
पारिवारिक कलहः 'दुर्गन्ध'लाई 'सुगन्ध'मा बदलौँ
आमाबुबा, छोराछोरी र भाइबहिनीहरूबिच हुने पारिवारिक मनुमुटाव, विवाद र झैझगडाको परिस्थितिलाई कसरी सम्हाल्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै, सद्‌गुरु हा…
थुप्रैका लागि सासु एक बदनाम पात्र भएकी छिन् । तर, कसरी उनले यस्तो अप्रिय छवि बनाइन ? थुप्रै मनोवैज्ञानिक र जैविक कारणहरू उल्लेख गर्दै, सद्‌गुरु हामीमा…